Past Event – Fall Festival / Apple Butter Days – Linn Creek | MOOzarks.com
Previous PostCoop’s Cafe – SeymourNext PostPast Event – Halloween SPOOKTACULAR
One thought on “Past Event – Fall Festival / Apple Butter Days – Linn Creek”
တ တင …က န နက ႐ င က အ တ ၿပ ႀက ႀက စ စ ၾကည သ ခ ရတယ ဆ လ ႔ တကယ က က ဇ ပ ပ တ တင ရ… ည … တ ၾက မန မ ပည က အမ တ ဗ ဆရ တ က က န က မတ ပ ႔ နပ အ မယ ဗ ) စ သက တ သ ရလ ႔ ဝမ သ ရပ တယ .. အမည ဝ က စ ဖတ သ …သမ က ယ င လ ႔ တ င မတ က လ က န ႔ န တ ၾက ၃ ရက လ က မအ ပ တ ဘ လန ဆန တက က နမ မ ဘ တ ဒ ကၡ… )မခ စ စ အ မ …ဝ သန ႐ င လ ပ ဗ … )Khin …Alright..! Next time, I’m gonna makeasilent clip like at the dawn of movie era. 🙂 Thanks for your apapicirteon! မ င မ … က ဇ ည ရ… ( မ လ ပ ႔ထ တ သ တယ ည ရ စကန ဖတ ၿပ ပ ႔လ က မ တခ ထ စ ပန မလ ႔ စဥ စ ထ လ ႔…)ဇ န …Thanksalot Zun! ဇ န ရ ႕ အမ တ သည က င ပ က တ တကယ က ခ က စရ ပ ပ ဗ … ) ဒ တ ယအႀက မ လ ၿပ အ ပ လ ႔လည က ဇ ပ ပ ည မ ရ… မသက ဝ …Thanks sis..! It’s pleasant to have suchacomment. :)ည မလ ပည ရ ပ …ဝ … ည မစက ၾက ရတ အ မ က မ က ၾကက တ င ပ က ထ က လ န ပ ဖစ သ တယ ) ဒ မ လည အ နၿပ ဗ ဒ ပမယ အ မ ထ မ တ တ ႐ ပ န ႔ နလ ႔ရ လ က အ င ပ တယ .. )Success … က ဇ တင ပ တယ ဗ … လ ယ …ဝ .. whatacomment, huh! ခ စ စရ က န မန ႔ လ အတ က က ဇ ပ ဗ Happy to make your day, bro! ဒ တ ယအႀက မ လ ပ သ တ က န မန ႔ အတ က လည က ဇ ဗ ႕ ဂစ တ သင မယ ဆ အ ပ တယ ဗ .. )ဘ န ဘ န တ က …တင ပ .. အ ပ တ က ဇ ပ ဘ ရ .. )မစ ပယ …ဒ လ က လည မဟ တ ပ ဘ ဗ ရ င သ လ က လ ပ ၾကည ခ င တ သ ဘ ပ က ဇ ပ ပ န … Ms.regular reader …Thanks! Hope I’ll be able to make more clips, too. :)မ ခ … န႔လယ ခင က တ တ ဆ တ လ န လ ႔ က ဖ မ ခ သ တ တ င ၾက နရတယ ဂလ ဂလ န ႔ လ… ) သ ခ င လ န ထ င သ လ ႔လည က ဇ မ ခ .. က ည မ …မင သ ပ က ဝ တဝ ပ မင ရတ က က န ပ ခ င တ dramatic, poetic ရသက မရဘ ၾကည သ တ က သရ က န ႔ မ မ စ လ ႔ဗ ) အင .. က ည မ ပ မ အ႐ ပ က လ က သတ ထ ၿပ ပန ၾကည မ တယ ဟ တ တယ ဗ ခ သ က ဝက ဝ န ႔ အ တ က တ နတ က .. အ ဒ ခ သ ႐ ပ က လ ရ ႕ န က က ယ က အ ၾက င တ က ရ ဝတ မ က ဝန တ န ႔ ပ ႔စ တစ ပ ဒ တ ရ မ ဖစ တ မယ န ႔ တ ပ ရ ႕ ဗ … )မ,အၿပ ပန …အခ န က တ နည နည ပ ရတ အမ န ပ ပ ဗ လ လည တ အတ က ရ က န မန ႔ အတ က ပ က ဇ ပ န .. Ma Iora …Got an idea, huh? 🙂 Then, just go for it, sis..!!!မ,ဝ ဆ … က ဇ ပ .. Ma Shinlay,Thanks sis..!ည မ Blackroze …လ အ ပ တ က ဇ တင ပ တယ ည မ ရ… မမ င ႔ …ဒ လ က ခက ခ တ က န နက ႐ င ၾက က န ရ အ င ၾကည သ လ ႔ အထ ပ က ဇ တင ပ တယ ဗ ဒ လ မ က ယ တ င တ ဆ တ စ တ ဝင စ ရင က န တ ႔ တစ ပ ဒ လ က အတ တ လ ပ လ က ရ အ င လ ) က န ကလည မ ဒယ လ ႐ နတ မမ င ႔ရ… )Anonymous …Thank you so much for your apapicirteon!ည မအ န ဂ ယ လ င …အ ပ တ က ဇ ပ ည မ ရ…